15 | March | 2013 | Danya Wadi
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစံသာအောင်ရေးသားသော ရခိုင်ဒင်္ဂါးစာအုပ်ထဲက ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားများ
By danyawadi March 15, 2013 Leaveacomment
စာမျက်နှာအထားအသို မှန်ကန်ရေးအတွက် ကနက်ရှင် ကောင်းလျှင်န်ြလည် Edit လုပ်သွားပါမည်။ Advertisements
ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းနှင့်စပ်ဆိုင်းသည်ကို ကောက်နုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်အုပ်လုံးတင်ပြခြင်းမပြုပါ။
ရခိုင် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်၏ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ အမှန်အတိုင်းဖြစ်ရန် ပြည်သူများလိုလား …
မတ်လ ၁၅ ၊ ၂၀၁၃ M-Media နေသစ်ထွန်း ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ နောက်ဆုံး အစီအရင်ခံစာ အမှန်အတိုင်းဖြစ်ရန် ပြည်သူများ လိုလား ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ၏ သမ္မတထံ အစီအရင်ခံမည့်ရက်အား နိုဝင်ဘာ ၁၆-ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁- နေ့သို့ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့၏ နောက်ဆုံး တင်ပြမည့် အစီအရင်ခံစာရက် မတ်လ ၃၁-နေ့ သည် တဖြည်ဖြည်းနီးကပ်လာသည်။ ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ၇-လကျော်ကြာ လေ့လာ သုတေသန ပြုခဲ့သော နိုင်ငံတော်သမ္မတ ထံတင်ပြမည့် ၄င်းအစီအရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တရား အတိုင်း ဖြစ်စေ ရန် ပြည်သူ များက လိုလားလျက်ရှိသည်။ “ မကြာခင် နောက်ဆုံးအစီအရင်ခံစာ ထွက်မယ်လို့ ကြားရတယ်။ […]
မြန်မာ ပြည်တွင်းနေထိုင်ကြသူများ အားလုံးမှာ ကုလားများ ဖြစ်ကြသည်။
By danyawadi March 15, 20132Comments
ooney Shar shared Lu Lay‘s photo. မြန်မာ ပြည်တွင်းနေထိုင်ကြသူများ အားလုံးမှာ ကုလားများ ဖြင်.ကြသည်။ ********************************************** စာေ၇း ဆရာ အချို.၏ ပြောကြားချက်အရ ကုလား ဟူသော ဝေါဟာရ သည်. ကူးလာ မှာ ဆင်းသက်လာသောကြောင်. ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ခေါ်ပါများပြိး ကုလား ဆိုသော အသံ ပေါပေါက်လာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ၏သို.ဆိုလျှင် မေးစ၇ာ မေးခွန်းများစွာ ရှိနေသည်။မြန်မာ ပြည်တွင်းနေထိုင် လျှက်ရှိကြသော ဗမာ များမှာ မြေကြိးမှ ထိုးဖောက်၍ ထွက်လာတာလား (သို.)မိုးပေါမှာ ကြဆင်းလာတာလား။ ထိုး နှစ်မျိုး မှာဘယ် တစ်မျိုး မှ ဖြင်.နိုင်ချေ မရှိပါ.။ ထိုကြောင်. မြန်မာ ပြည်တွင်းနေထိုင်ကြသူများ အားလုံးမှာ […]
အိန္ဒြိယနိုင်ငံ တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဆင်တစ်ကောင် ရထားတိုက်သေခဲ့
အိန္ဒြိယနိုင်ငံ တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဆင်တစ်ကောင် ရထားတိုက်သေခဲ့ ပုံမှာမြင်ရတာကတော့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ရင်နင့်ဖွယ်ရာပါပဲ။အိန္ဒြိယ ရထား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ပါဝမ်ကူမာဘန်ဆယ် ရဲ့ပြောပြချက်အရ ဆင်တွေသွားလာဖို့လမ်းကြောင်းတွေ သစ်တောရေး ရာဌာနက သတ်မှတ်ပြီးသားပါတဲ့၊ အရှိန်ထိန်း ချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေလဲ ပြဌန်းထားပါတယ်၊ နောက်ပြီး ရထားမောင်းသူကို ကြိုတင်သတိပေးနိုင်မယ့် ဆိုင်းဘုတ်တွေ လဲ ပေးထားပါ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အိန္ဒြိယသတင်းစာဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Times of India မှာဖော်ပြထားတာကတော့ 2010 ခုနှစ်ကစပြီး ရထားတိုက်သတ်လို့သေတဲ့ဆင်အရေအတွက် ၄၉ ကောင်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ MTHN(UNIM) ref; by http://www.zinyawnews.com source: globalpost NaingLinn ဘာသာပြန်
အေးချမ်းနေသော သံတွဲမြို့အား ဆူပူရန် လှုံ့ဆော်နေမှုအပေါ် သမ္မတကြီးထံသို့ မင်းညိုငယ်(သံတွဲ)မှ တိုင်ကြားစာပေးပို့
M-Media‘s photo. အေးချမ်းနေသော သံတွဲမြို့အား ဆူပူရန် လှုံ့ဆော်နေမှုအပေါ် သမ္မတကြီးထံသို့ မင်းညိုငယ်(သံတွဲ)မှ တိုင်ကြားစာပေးပို့ —————– မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၁၃ M-Media ဇာဏီ ရန်ကုန် ။ ။ ဘာသာလူမျိုး မခွဲခြားဘဲ ခေတ် အဆက်ဆက် အေးချမ်းစွာနေလာခဲ့သည့် သံတွဲမြို့နယ်တွင် ယခု ၂၀၁၃-ခု မတ်လ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလေးများကို စာမေးပွဲအခန်း သီးသန့်ခွဲဖြေရန် ပြည်နယ် အစိုးရမှ ခွဲခြားနေမှုနှင့် စာမေးပွဲအပြီးတွင် လူမှုရေး ဘာသာရေး ဆူပူကြမည်ဟု လှုံ့ဆော် ၀ါဒဖြန့် နေမှုကို ဖော်ထုတ် အရေးယူ ပေးရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးထံသို့ ဦးလှဝင်း(မင်းညိုငယ်-သံတွဲ)မှ တိုင်စာ တစ်စောင် ပေးပို့တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သံတွဲမြို့နယ်သည် […]
မဟတ္တမဂန္ဓီ၏ ဘာသာတရား ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ
မဟတ္တမဂန္ဓီ မကွယ်လွန်မီက ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံမှ အမေရိကန် အမျိုးသား တစ်ဦးက ဂန္ဒီကို အားကျ၍ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဖြစ်လိုကြောင်း ဂန္ဓီထံ အကြောင်းကြားဖူးသည်။ ထိုအခါ မဟတ္တမဂန္ဓီက သူ၏ ပြန်ကြားစာ၌ ဘာသာတရား ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်း၏ အယူအဆကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြထားခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ် – လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဟိန္ဒူဘာသာထဲ ဝင်ပါလား၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ဝင်ပါလားလို့ မတိုက်တွန်းဘူး။ မိမိ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားကိုသာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီး မိမိ ဘာသာတရားထဲက ညွှန်ကြားပြောပြတာတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးပါ လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်ရင် ခရစ်ယာန်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားစေချင်တယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်ရင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကောင်း […]